मन्त्री थापाले मुगामा गरे मतदान
जिल्लाको विकासका लागि आफ्नो जित आवश्यक रहेको दावी
निशान न्युज मंसिर २१, 2074
धनकुटा । उद्योग मन्त्री तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार सुनीलबहादुर थापाले धनकुटाको पाख्रिवासमा मतदान गरेका छन् । थापाले पाख्रिवास नगरपालिका वडा नं. ८ मुगास्थित जागिर गाउँ मतदान केन्द्रबाट बिहान ७ बजेर २ मिनेटमा मतदान गरेका हुन् ।
मन्त्री थापाले मतदान गरेपछि जिल्लाबासीको मन जितेकाले आफु विजयी हुने दावी गरे । उनले मतदाताको उत्साह देखेर आफु पनि उत्साहि बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले बुधबार मात्रै आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी राजेन्द्र राईले समेत जिल्लाको विकासका लागि आफ्नो जितको आवश्यक रहेको बताएकाले पनि योपटक भारी मतले विजयी बन्ने दावी गरे ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार राजेन्द्र राईले पाख्रिवास नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित सरस्वती प्रावि मतदान केन्द्रबाट बिहान ७ बजेर २० मिनेट जादा मतदान गरे । मतदानपछि राईले दोसो संविधानसभामा आफु पराजित भए पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले आफु र आफ्नो पार्टीलाई मतदान गरेकोले आफु विजयी हुने दावी गरे ।
त्यसैगरी बरिष्ठ साहित्यकार डा. झमककुमारी घिमिरेले धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित बहुउदेश्य सामुदायीक भवन आँखा अस्पताल (क) केन्द्रमा मतदान गरिन् ।
नगर सभापतिको घरमा १४ वर्षिय बालिका झुण्डिएको अवस्थामा फेला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस नगर सभापतिको घरमा १४ वर्षिय बालिका झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छ...
कैलालीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते
धनगढी । कैलालीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् । बुढितोलाबाट गोदारी जाँदै गरेको ना ५ ...
मकवानपुरमा पिकनिक बस दुर्घटना
मकवानपुर । ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर २्४ को सिमानामा पिकनिकको बस दुर्घटना भएको छ । महालक्ष...
२० किलो चरेससहित एक पक्राउ
कपिलबस्तु । प्रहरीले लागुऔषध २० किलो चरेससहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको शिवराज नगरपालि...
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको याङजीमा सुतेकै अवस्थामा शनिबार एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने...
जन्ती बसको ठक्कर बाट साइकल यात्रीको मृत्य
चितवन । जन्ती बोकेको बसले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा भरतपुर महानगरपालिका–१३ मा साइकल यात्रीको मृ...
ख्वप कलेज र गोर्खा इको प्यानलबीच भयो १२ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ लिवाली भक्तपुरले अध्यापन र अनुसन्धानलाई पनि थप प्रभावकारी बना...
महिलाका अति संबेदनशील समस्याहरु : ‘भन्दा लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या बढ्दै जाने’
एकै व्यक्तिले धेरैसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा के हुन्छ ?
प्रहरीले गर्‍यो अखिल (छैठौं) महासचिवमाथि दुर्व्यवहार
‘मेरो श्रीमानले सधैँ साथीसँग सम्बन्ध राख्न दबाब दिन्थ्यो’
मालीगाउँमा प्रचण्ड : के छ प्रचण्ड र सुनील थापाबीच कनेक्सन ?
भारतीय वैज्ञानिकहरु भन्छन्, फेरि नेपालमा महाभूकम्प आउँछ
अख्तियारले डामेपछि शक्ति केन्द्र धाउन थाले विक्रम पाण्डे, के सजिलै छाड्ला त अख्तियारले ?
छोरालाई पत्नीको अश्लिल भिडियो देखाएपछि...
व्यवसायीको नेतृत्व गर्न फेरि मैदानमा उत्रिए जोशी
© 2018 निशानदेवी मिडिया प्रालि